Filtrer les éléments par date : lundi, 25 février 2019
lundi, 25 février 2019 21:57
Jono an-dranomasina: Sambo miisa 41 no nahazo fahazoan-dalana
Nomarihina tao Mahajanga androany ny fanokafana ny taom-panjonoana.
lundi, 25 février 2019 21:18
Jirama: 45 miliara Ariary isam-bolana ny vola aloany amin'ireo orinasa vahiny mpamokatra herinaratra ho azy
“Amin’ny herinandro ambony io dia tokony ho vita ny fifanarahana vaovao eo amin’ny Ministera sy ireo rehetra mpiara-miombon’antoka amin’ny orinasa Jirama”, hoy ny Praiminisitra, Lehiben’ny governementa, Ntsay Christian, androany, raha nitsidika sy nifampiresaka tamin’ny tompon’andraikitra teny amin’ny toby mpamokatra herinaratra an’ny orinasa Jirama eny Ambohimanambola ny delegasiona nahitana ny minisitry ny Angovo, ny Rano ary Akoran’afo, ary ireo tompon’andraikitra avy amin’ny Jirama notarihin’ny Tale jeneraliny.
Ny fitsidihana dia tafiditra ao anatin’ny fanomanana ny fanarenana ny Jirama.
lundi, 25 février 2019 21:15
Antsobolo-Antananarivo V: Jiolahy roa maty voatifitry ny Polisy
Efa-dahy izy ireo no nanafika mpivaro-panafody teny androany. Tonga ara-potoana ny Polisy. Nifamaliana ny tifitra. Maty ny roa tamin'ireo jiolahy, naratra ary voasambotra ny roa.
lundi, 25 février 2019 21:11
Port-Bergé: Paraky gasy 19 gony saron'ny Polisy
Milanja iray taonina eo ireto paraky gasy saron'ny Polisy nandritra ny fisavana teo amin'ny sakana eo ampidirana an'i Port-Bergé ny marainan'ny sabotsy teo.
Araka ny lalàna tamin'ny 2017 dia ny OFMATA ihany no mahazo manao fandraharahana paraky raha tsy nahazo alalana manokana, tsy nisy taratasy fahazoan-dalana ireto paraky gasy ireto ka izay no nigiazana avy hatrany azy ireo.
Natolotra ny OFMATA ny entana, handoa onitra kosa ny tompony, "fourrière" ny fiara nitondra azy.
175 taonina ny paraky voaangon'ny OFMATA ny taona 2018.
lundi, 25 février 2019 21:05
Nosikely-Morondava: Tovolahy 20 taona natelin'ny ranomasina
Niara-nisaika tamin'ireo namany teo amin'ny torapasika Nosikely-Morondava ity tovolahy ity omaly tolakandro. Tafaverina an-tanety ireo namany, izy kosa tavela ary natelin'ny ranomasina ary mbola karohina hatramin'ny androany.
lundi, 25 février 2019 20:36
Antsirabe: Naaton'ny mpanolotsaina tamin'ny asany ny Ben'ny tanàna Razanakolona Paul
Izay no fanapahan-kevitry ny mpanolotsaina nandritra ny fivorian'izy ireo androany.
Miisa 19 ny mpikambana ao amin'ny filankevitry ny tanàna, 15 no tonga nivory ka ny 14 nandany ny fampiatoana amin'ny asa maha Ben'ny tanàna azy an'i Razanakolona Paul Ramasitera. Nanao vato fotsy ny iray.
Manana olana amin'ny fitantanana, indrindra ara-bola ny Kaominina ambonivohitra Antsirabe. 10 volana ny karaman'ny mpiasa tsy voaloa izay nitarika fitokonan'ny mpiasa efa herinandro izay.
Nanilika ny rihitra tamin'ireo mpikamban'ny delegasiona manokana nitantana ny tanàna teo alohany ny Ben'ny tanàna ka vao maika nitarika tamin'ny ampamoaka, ary nifampitory tany amin'ny Fitsarana, ary tonga amin'izao fampiatoana azy amin'ny asa izao. Na ireo mpanolotsaina iray lisitra taminy aza mitsipaka azy ankehitriny.
lundi, 25 février 2019 20:31
Fananantany: Miisa 200 ireo “Inspecteurs des domaines” eto Madagasikara
Nilaza ny tale jeneraly vaovao misahana ny fananan-tany, Ratolorantsoa Petera, fa « tsy maintsy aparitaka manerana ny nosy izy ireo mba hanatsarana sy hanafainganana ny fikarakarana ny antontan-taratasin’ny fananan-tany ».
Nanamafy hatrany ity Tale Jeneraly vaovao ity fa « tsy ho ekena intsony ny fahatarana sy fitarazoana eo amin’ny fanomezana ny taratasy mahakasika ny fananan-tany ».
Tontosa ny 22 febroary teo ny famindram-pitantanana teo amin’ny tale jeneralin’ny fananan-tany teo aloha Rasolomampionona Hasimpirenena sy ny tale jeneraly vaovao Ratolorantsoa Petera.
lundi, 25 février 2019 16:05
Soanierana - Boriboritany faha-4: Nihotsaka tsy azo alefa ny arabe vokatry ny oram-baratra
Fianakaviana miisa 9, izay ahitana olona 54 no tsy maintsy nafindra toerana satria tandindonin-doza ny trano fonenan’izy ireo noho ny fihotsahan’ny ampahan-dalana mampitohy ny Descours sy Soanierana Ambony, mihazo ny toby miaramila CAPSAT, ao anatin’ny Fokontany Soanierana III- I, Boriboritany faha-4, Kaominina Antananarivo Renivohitra.
Tamin’ny 19 janoary 2019 no efa nanomboka niletsy ny rarivato tamin’io toerana io, noho ny oram-baratra, vao mainka nandavaka vokatry ny orana nisesy ny herinandro lasa iny, indrindra ny sabotsy 23 ny volana febroary 2019, ka tsy maintsy noraisina haingana ny fepetra ho fisorohana ny loza hafa mety hitranga.
lundi, 25 février 2019 13:43
Oniversite Antsiranana: Roa ny kandida mifaninana ho filoha
Abdoul Fatah, sojaben’ny fakioltean’ny siansa sy Ratsaramody Justin, lefitry ny filohan’ny oniversite amperinasa Manorohanta Cécile, ireo no kandida hifaninana ho filohan’ny Oniversite Antsiranana mandritra ny fifidianana hotanterahina amin’ny herinandro ambony.
lundi, 25 février 2019 13:40
Répartition siège députation